Atin'ny iPad Air amin'ny antsipiriany | Vaovao IPhone
IPad Air anatiny amin'ny antsipiriany
Como Nampahafantatra anao izahay andro vitsivitsy lasa izay tao amin'ny iPad News, ry zalahy avy any iFixit Nopotehin'izy ireo tanteraka ny iPad Air vaovao. Ity maodely farany ity dia manify sy maivana kokoa noho ireo teo alohany, ankoatry ny fitondrana ny chip A7 miaraka amina maritrano 64, maodely Qualcomm MDM9615 LTE. Atorinay anao ny pitsopitsony rehetra.
2 A7 sôkôla
Ny efijery dia toa nataon'i LG. Ny orinasa Koreana miaraka amin'i Sharp sy Samsung no mpamatsy andrasana amin'ny fanamboarana ny efijery amin'ilay maodely vaovao. LG sy Sharp dia manana olana amin'ny fampisehoana retina vaovao ao amin'ny iPad Mini Retina, ka azo antoka fa tsy maintsy hitodika any amin'ny Samsung i Apple raha mila fanampiana.
Manana mpizara roa Broadcom BCM5976C1KUB6G ianao mampiasa ny efijery mikasika, mitovy amin'ny BCM5976A0KUB2G hita eo amin'ny trackpad an'ny MacBook ankehitriny sy taloha.
Ny chip misy isa ao anatin'ny fitaovana dia APL5698, hafa noho izay hita ao anatin'ny iPhone 5s miaraka amina processeur mitovy nefa miaraka amin'ny fanisana APL0698. Ny processeur an'ny iPad Air dia 100 Mhz haingana kokoa noho ilay ampiasaina amin'ny iPhone 5s, raha ny valin'ny benchmarks farany farany.
Ny iPad Air dia manana 1 GB Elpida DDR3 SDRAM izay misy amin'ny puce tokana, raha oharina amin'ny iPad taloha, izay namboarina ho roa.
Ny bakteria dia 32,9 Whr avy amin'ny sela roa, kely noho ny bateria amin'ireo sela telo izay nampiasa ny iPad fahefatra an'ny 43 Whr. Na izany aza, ny fiainana bateria an'ny fitaovana roa dia hitovy.
Araka ny efa nampoizina, ny idealy misy fakan-tsary hita tamin'io hita io ihany amin'ny kinova taloha, na dia fohy kokoa aza ny halavany. Ny fakantsary HD mitohy miaraka amin'ny 1,2 Mpx sy ny 720p vahaolana, fa miaraka amina sensor vaovao.
Efa hita Mikrô 2 eo amin'ny sisin'ny farany fitaovana hampihenana ny tabataba ao ambadika.
IPad Air dia manana Antenna fampidirana roa sy fivoarana roa miaraka amin'ny teknolojia MIMO, noho izany ny fampisehoana mampiasa Wi-Fi dia haingana indroa noho ny tamin'ny kinova teo aloha.
Ny slot SIM card dia nano-type izao fa tsy kinova taloha izay nampiasa micro-SIM.
Nahazo isa 2 amin'ny 10 ny iFixit amin'ny lafiny mety hisian'ny fanamboarana. Ny singa tokana azontsika ovaina raha sendra simba na tsy mandeha amin'ny laoniny raha tsy voasaron'ny fiantohana dia ny efijery LCD sy ny vera manarona azy. Saika soloina amin'ny fitaovana ilay bateria noho ny habetsaky ny lakaoly nampiasainy, izay manahirana azy miova.
Fanazavana fanampiny - Ao anatin'ny iPad Air misaotra an'i iFixit
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » IPad Air anatiny amin'ny antsipiriany
Tapaka ny jack ao anaty iPad-ko, inona no hataoko? satria na ny tweezers aza tsy azoko esorina dia apetraka ao anatiny tsara
iPhone 5 amin'ny halaliny, famolavolana (II)